रमेश वडाल आइतबार, मंसिर २८, २०७७ मा प्रकाशित
माननिय योगेश भट्टराईज्यु,
तपाईको निर्देशन अनुसार पर्यटन उत्थानको ध्येयले हप्तामा दुई दिन विदाको व्यवस्थाको संभाव्यता सम्वन्धमा अध्ययन गर्न पर्यटन मन्त्रालयको प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएको निजामति कर्मचारीमात्र सम्मिलित समितिको प्रतिवेदन भनि संचार माध्यममा प्रकाशित भएको समाचारले मेरो पनि ध्यानकर्षण गरेको छ ।
यस प्रतिवेदनले दुई दिन विदा दिनु पर्ने तर्क र यसको फाईदाको वारेमा धेरै उल्लेख गरेको रहेछ । मलाई यस तथ्य प्रति कुनै कुरा भन्नु छैन । यो प्रतिवेदन पढेपछि स्पष्ट भयो कि नेपालमा सरकारी संयन्त्रले दिने प्रतिवेदन कति हचुवा र एकांकी हुने रहेछ । र यस्तै प्रतिवेदनमा भर पर्दा राज्यलाई ठूलो जोखिम हुने रहेछ ।
एउटा विद्यार्थीले शिक्षकलाई भनेछन, सर, आज मैले दश रुपया कमाए । शिक्षकले भने कसरी कमायौ ? विद्यार्थीले भन्यो ः आज म वस को पछि पछि हिडेर आए । वस चढेको भए दश रुपया खर्च हुने थियो । शिक्षकले भने– वावु, राम्रो काम ग¥यौ, यदि तिमी ट्याक्सीको पछि पछि हिडेको भए पचास रुपया कमाउने थियौ । हिड्नै पर्दा ट्याक्सीको पछाडि हिडेमा वढि कमाईन्छ, वुझ्यौ ।
सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले दिएको फाईदाको हिसाव र माथीको संवाद उस्तै रहेछ । प्रतिवेदनमा हालको एक दिन साप्ताहिक विदा वढाई दुई दिन विदा दिदा सरकारलाई एक अर्व चैसठ्ठी करोड फाईदा हुने उल्लेख रहेछ । सवै मिडियाले यसलाई खुव प्रचार गरे । मलाई लाग्यो, यदि हप्तामा एक दिन विदा दिदा एक अर्व चौसठ्ठी करोड फाईदा भए सातै दिन दिदा राज्यलाई एघार अर्व अठचालिस करोड वचत हुन्छ । किन प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख भएन ?
यो प्रतिवेदनले वचत हिसाव गरेछ । तर मेरो प्रश्न छ, दिने विदा निजामती कर्मचारीलाई मात्र हो वा शिक्षक, सेना, प्रहरी, वा सवै क्षेत्रलाई पनी हो । यदि सवै क्षेत्रलाई दिने हो भने दुई दिन विदा दिएपछि सरकारले आवश्यक सेवा संचालनमा खटिने कर्मचारी देखि सुरक्षा निकाय सम्मलाई दिने ओभरटाईम भत्तामा राज्यको कति खर्च हुन्छ ? कुनै कुरा यस प्रतिवेदनमा छैन । विधालयमा दुई दिन विदा दिदा यसले विधार्थीको कार्य घण्टा पर्याप्त हुन्छ वा हुदैन । के वालवालिकालाई समेत वढि समय पढाउन लगाउने ? यस तर्फ विवेचना गर्ने प्रयास पनी गरिएको छैन । यसैले यो प्रतिवेदन एक पक्षीय भयो कि ? यसमा भर पर्नु अगाडि तपाईले त्यसको व्ययभार र यसले अन्य क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव के र कति हुन्छ हिसाव गर्न लगाउनु होला ।
हामीलाई थाहा छ, दुनियामा कार्य समय घटाएर उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने अध्ययन भएका छन । यसको प्रयोग केहि धनी मुलुकहरुले समेत गरेका छन् । तर कार्य समय घटाउदा साथ उत्पादकत्व वृद्धि भै हाल्ने भने हैन । यसको लागी वर्क कल्चर त्यहि अनुसार विकास भएको हुन्छ । नेपालमा पहिला पनि शुरुमा अदालतमा दुई दिन विदा दिईयो र पछि सरकारी कर्मचारीलाई समेत दुई दिन विदा दिईयो । र ९ वजे देखि ५ वजे सम्मको कार्य समय तोकियो । तर नत कहिलै ९ वजे नै सरकारी कार्यलय खुले नत अदालतमा १० वजे नै वहस गर्न पाईयो । यसले पर्यटनको एउटा पाटो मात्र प्रवद्र्धन भयो । सरकारी कर्मचारीहरु क्यासिनोमा भेटिए । तासका खालमा भेटिए । त्यस वखतको समाचारहरु अध्यायन गर्नु भयो भने स्पष्ट हुन्छ त्यसै वेलामा मुलकभर मिनि क्यासिनो विकास भए । यो प्रतिवेदनले त्यसतर्फ कुनै कुरा उल्लेख गरेको पाईएन । र यस्तो नकारात्मक प्रभाव रोक्न कुनै सुझाव उल्लेख भएको पनी पाईएन ।
त्यसैले मन्त्रीज्यू, दुई दिन विदा दिदा पर्ने असर र त्यसलाई न्युनीकरण गर्न चालिनु पर्ने कदमका वारेमा कुनै कुरा विवेचना नगरी दुई दिन विदा दिने निष्कर्षमा नपुग्नु नै उचित होला । त्यसैले यसको नकारात्मक पक्षले पार्ने असर र त्यसको निकारणको वारेमा अयोचित विवेचना गराउनु होला ।
कोहि सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर फर्किएको व्यक्तिलाई वेसक्याम्पमा देखेर आफू आरोहण नै नगरी वेस क्याम्पवाटै फर्कन मिल्छ र ? धनी मुलुकका देखासेखि गरेर हप्तामा दुई दिन विदा दिने निर्णय गर्न हतार नगर्ने कि ?
प्रतिवेदनमा हप्तामा दुई दिन विदा दिने मुलुकको संख्या ९१ प्रतिशत र एशिया र सार्क क्षेत्रमा नै ८८ प्रतिशत भनि दिएको तथ्यांक मिलेन कि ? प्रतिवेदनमा रिफरेन्स दिईएको https://clockify.me/working-hours मा त फरक तथ्यांक उल्लेख छ । त्यसमा त नेपालमा हप्तामा दुई दिन विदा दिने मुलुकको सुचीमा राखेको छ भने भारत, वंगलादेश हप्तामा एक दिन विदा दिने मुलुकको रुपमा राखेको रहेछ । त्यसैले प्रतिवेदनको सूचना श्रोत भेरिफाई गर्ने कि ?
कतिपय मुलुकमा हप्तामा दुई दिन विदा दिदा वार्षिक कार्यदिन र कार्यघण्टाको व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । हप्तामा दुई दिन विदा दिने मुलुकमा अन्य सार्वजनिक र अन्य विदा सिमिट गर्ने गरिएको पाईन्छ । नेपालमा अहिले पनी हप्तामा एकदिन विदा दिंदा वर्षमा ५२ दिन, सार्वजनिक विदा सरकारी कर्मचारीलाई २५ देखि ४० (समुदाय विषेशको लागी) दिन सम्म दिने गरिएको छ । यस वाहेक सरकारी कर्मचारीले घरविदा ३० दिन, विरामी विदा १२ दिन, भैपरि आउने विदा ६ दिन, पर्व विदा ६ दिन समेत पाउछन् । सवै विदा जोड्दा वर्षमा १३१ दिन ( १४६ दिन सम्म समुदाय विशेषको लागिसमेत) भन्दा वढि दिन सरकारी कर्मचारीले उपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । यदि हप्तामा दुई दिन विदा दिने हो भने थप ५२ दिन विदा थप हुन्छ र विदा संख्या सरकारी कर्मचारीलाई १८३ दिन हुन जान्छ । यो प्रतिवेदनले हप्तामा दुई दिन विदा दिदा अन्य विदा कटौति गर्ने वारेमा कुनै प्रस्ताव गरेको छैन ।
यदि यो प्रतिवेदन लागु भएमा नेपाल सरकारी कर्मचारीले विदा धेरै पाउने मुलुकको सर्वोच्च स्थान हासिल गर्ने छ । तर सरकारी वाहेकका नीजिक्षेत्रका कर्मचारीरश्रमिकले कुल सार्वजनिक विदा १३ दिन, घरविदा १८ दिन, विरामी विदा १२ दिन र साप्ताहिक विदा ५२ दिन गरी कुल ९५ दिन विदा पाउने हुन्छ । यसवाट सरकारी र निजी क्षेत्रको विचमा विदाको खाडल पुरि नसक्ने अवस्था सृजना हुन्छ । यसले मुलुकको आम औधोगीक क्षेत्रमा नै समस्या सृजना गर्ने छ । र नीजि क्षेत्रमा विदा वृद्धिको माग सृजना भै औद्योगिक अशान्ती तर्फ मुलुक पुन धकेलिने छ । यसतर्फ यो प्रतिवेदनले केही वोलेको छैन।
यदि आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने हो भने हप्तामा दुई दिनको विदा प्रयाप्त हुदैन । कम्तिमा लगातार ५, ६ दिन विदा दिनु आवश्यक हुन्छ । दुई दिन विदा हुदा काठमाण्डौका व्यक्ति पोखरा गएर आउने अवस्था पनि हुदैन । यसका लागी विभिन्न मुलुकमा वार्षिक विदाको निश्चत हिस्सालाई पर्यटन प्रवद्र्धनमा अनिवार्य खर्च गर्नु पर्ने नत्र यस्तो विदा वापत पारिश्रमिक नदिने गरिन्छ । हाल सरकारी कर्मचारीले पाउने तिस दिने वार्षिक विदा मध्ये सात दिनलाई आन्तरिक पर्यटनमा खर्च गरेको निस्सा पेश गर्न लगाउनासाथ नै पर्यटन क्षेत्रमा चहलपहल शुरु हुन सक्छ । यस्तो व्यवस्था नीजि क्षेत्रमा गर्न समेत प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । तर यो सुझावमा समेत व्यापक छलफल गर्न सकिन्छ र निश्कर्षमा पुग्नु पर्दछ ।
हाल सार्वजनिक भएको यो प्रतिवदेनले पर्यटन प्रवर्धनको विकल्पतर्फ भन्दा पनी आफले पाउने विदा कसरी वढाउने भन्नेमा मात्र केन्द्रित भएको पाईयो । प्रतिवेदन तयार गर्दा मुलुकका ट्रेड युनियन र उद्योगीहरु संग समेत सम्वाद गर्ने भन्ने उल्लेख रहेछ । तर नेपालको प्रमुख ट्रेड युनियन महासंघ जिफण्ट र सवै ट्रेड युनियन महासंघको छाता संगठन जेटियुसिसिसंग यसवारे कुनै छलफल र परामर्श भएको छैन । पर्यटन क्षेत्रका युनियनसंग समेत परामर्श भएको रहेछन ।
सरकारी कर्मचारी सम्मीलित अध्यायन टोलीले आफुलाई मात्र फाईदा र मुलुकलाई कुनै फाईदा नपुग्ने प्रतिवेदन दिदा कुन युनियनसंग परामर्श गरेको भन्ने कुरा समेत प्रतिवेदनमा खुलाएको छैन । यसैले यस सम्वन्धमा निष्कर्षमा पुग्नु अगाडि वृहत्तर रुपमा सवै औधोगीक क्षेत्र र त्यसमा काम गर्ने श्रमिक युनियन लगायत सवैसंग पर्याप्त परामर्श र छलफल गर्नु हुन अनुरोध छ ।
(अधिवक्ता वडाल नेकपाको भातृ संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघसंग आवद्ध छन्)
रमेश वडालबाट थप
संसद् पुर्नस्थापनाको मुद्धाः मनमोहनको संझना र अहिलेको अवस्था मंगलबार, फागुन ११, २०७७